Black nopotsehina tongolo gasy - China Shandong Gongxian Gmengyuan
Black tongolo lay series
Pepper entana andian-dahatsoratra
Tsaramaso entana andian-dahatsoratra
mampahatsiro sakafo series
Single bagged mainty tongolo lay
Chili fizarana & Rings
Chili Flakes / kivy Chili
Black nopotsehina tongolo gasy
Description ny mainty tongolo lay Rehefa nafindra amin'ny alalan'ny Biotech, mainty tongolo lay dia afaka miala ny proteinina ho 18 karazana "asidra amine" ilaina ho an'ny olombelona isan'andro vatana, izay azo haingana hifantoka tanteraka anilan'ny faty. Ao amin'ny "Mpamorona Foods Program" tatitra momba fototra sakafo homamiadan'ny fisorohana fikarohana ataon'ny USNCI toy ny afovoan-ny fianarana, tokony ho 48 karazana sakafo mahomby dia tononina, ankoatra izay "tongolo lay" dia faharoa ny tsy. Black tongolo lay tena misy asidra amine 18, Vita ...
Description ny mainty tongolo lay
Taorian'ny nafindra tamin'ny alalan'ny Biotech, mainty tongolo lay dia afaka miala ny proteinina ho 18 karazana "asidra amine" ilaina ho an'ny olombelona isan'andro vatana, izay azo haingana hifantoka tanteraka anilan'ny faty.
Ao amin'ny "Mpamorona Foods Program" tatitra momba fototra sakafo homamiadan'ny fisorohana fikarohana ataon'ny USNCI toy ny afovoan-ny fianarana, tokony ho 48 karazana sakafo mahomby dia tononina, ankoatra izay "tongolo lay" dia faharoa ny tsy.
Black tongolo lay tena misy asidra amine 18, vitaminina (C, B, A), mamantatra singa (phosphore, potasioma, manezioma, ny sodium, kalsioma, kalsioma, silisiôma, aliminioma, fanitso, sélénium sy germanium), sy ny solifara Kamban-teny carbohydrate.
Ny asa feno ny mainty tongolo lay dia 10 heny noho ny olon-tsotra tongolo lay; ny antioxidant fahafahana dia 15 heny noho ny olon-tsotra tongolo lay.
Tian Koukuan, manam-pahaizana malaza Japana ny molekiolan'ny cellule biolojia sy ny mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Mie ny fikarohana dia maneho fa tongolo lay mainty antioxidant fahafahana eo amin'ny tsara indrindra ao amin'ny maherin'ny 300 karazana sakafo amin'ny antioxidant miasa ny mifanohitra.
Vokatry ny mainty tongolo lay
Anti-milaza zavatra: Ny allicin hita ao mainty antibacterial tongolo lay manana vokany.
Anti-fivontosana vokany: Black afaka hanakana ny tongolo lay sy voafintina, ny "carcinogen" nitrosamines, ary manakana ny fitomboan'ny kansera ny sela, ka vonoy ny "kansera sela". "Ajoene" (diallyl thiosulfate) dia zavatra simika manana miovaova sy manan-danja inhibitory vokany eo amin'ny fitomboan'ny sela fivontosana isan-karazany, indrindra fa voan'ny kanseran'ny ra sela.
Mba hisorohana ny aretina cardiocerebrovascular: anaram-bositra iray hafa ny "mainty tongolo lay" nomen'ny mpahay siansa no "ra scavenger."
Mba hampiroboroboana ny fitomboan'ny volo: Ny mikorontana menaka ny tongolo lay mainty Afaka manafaingana ny ra tari-dalana (sebaceous fihary) sy ny volo follicle mikoriana, dia toy izany no mampiroborobo ny fitomboan'ny volo. Ankoatra izany, dia misy ihany koa ny fitsaboana vokatry fioriana
To kokoa fiasan'ny-kery fanefitra: Biby fanandramana dia maneho fa ny saborany-menaka mikorontana mety levona ao amin'ny "mainty tongolo lay" be dia afaka manatsara ny fiasan'ny phagocytic ny "macrophage" ary mampitombo ny hery fanefitra.
Mba hampandrosoana ny fahalalana ny fitomboan'ny: "mainty tongolo lay" singa sy ny vitaminina B1 amin'ny vatan'ny olombelona dia afaka mamokatra "Amine tongolo gasy", ary ny "Amine tongolo gasy" dia afaka mampandroso sy mandrisika vitaminina-B1 ny asa, hanatsara ny carbohydrate oxidation vokatry ary manome hery ampy ho an'ny atidoha sela mba hihazonana mafy fomba fisainany.
Vokatry sakafo: tongolo lay manana sakafo avo dia avo vidy, sy ny otrikaina rehetra ilaina ho an'ny vatan'olombelona.
Mba hiarovana ny aty: Black tongolo lay manana asa antioxidant tena matanjaka. Afaka manakana ny "lipid peroxidase" fahasimbana eo amin'ny aty sela manify rafitra sy hiaro ny aty.
Hametraka lalàna ra siramamy sehatra: tongolo lay mainty Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fanaraha-maso ny ra siramamy.
Black tongolo lay dia afaka hampihena ny mety ho voan'ny kanseran'ny prostate: germanium sy sélénium, ny solifara Kamban-teny sy ny singa mineraly mainty tongolo lay.
Mety haka 2-3 sekely isan'andro. Voalohany dia afaka Peel ny tongolo gasy ary avy eo dia hihinana azy mivantana. Black tongolo gasy atao ihany koa ny manao lovia sy ny dite, rehefa nasiana vokatra tsara kokoa. Anatiny ny olona amin'ny hafanana ambony dia kevitra mba haka isan'andro. Olona voan'ny kanseran'ny ra sy ireo soritr'aretina ny aretina tsy coagulation kevitra hihinana.
Black tongolo lay Misy isan-karazany ny soritry singa, ary vitaminina fa ilain'ny vatan'ny olombelona. Afaka mampitombo polyphenols ary manome asa olona nahandro, ka manana 18 karazana asidra amine.
Ny olona izay mijaly noho ny na ny marary izay manana: tsy fahampian-dra, vy tsy fahampiana sy ny tsy fahampiana kalsioma; sy ny aretim-cerebrovascular; hyp
Previous: Black tongolo lay vovoka
Next: Tongolo gasy vaovao dipoavatra
zokiolona Black tongolo gasy
Black tongolo lay
Black tongolo gasy For Sale
Black Tongolo saosy Black
Black Tongolo Wholesale Price
Dehydrated Tongolo Flakes
Dehydrated Tongolo toto-kena
Factory Black Tongolo
masirasira Black tongolo gasy
Fenoy Amin'ny Black Tongolo
Fresh tongolo gasy
Fresh Peeled Tongolo
Fresh White Tongolo
Tongolo nifantoka Rano
tongolo gasy Price
tongolo lay Price Ao Shina
Japoney Black tongolo gasy
Normal White Tongolo
Organic Black tongolo gasy
Organic masirasira Black tongolo lay
Pure White tongolo gasy
Quality Tongolo Flakes
Supplier Fresh Tongolo
White tongolo gasy
Bagged maro - petal mainty tongolo lay
Black tongolo lay vovoka
Am-bifotsy mainty tongolo gasy
Adiresy: Room 1-101-1, Fanorenana 11, Hailiangyuanli, No. 717, Fengming Road, Baoshan Street, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, Sina